Ngwongwo Ngwongwo nke Infrared nke Na-ahụ Maka Igwe China Manufacturer
Nkọwa:Na-ekpo ọkụ akwa maka azụ,Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Na-ekpo ọkụ,Nkume Ụka Ọkpụkpụ
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka ebe a na-ekpocha ụlọ > Ngwongwo Ngwongwo nke Infrared nke Na-ahụ Maka Igwe
Ihe Nlereanya.: XHC-F010B
Ahụike ahụike yiri ka ọ bụ otu n'ime nsogbu kachasị ama maka ndụ oge a. Site na ihe nkiri ikpo ọkụ nke juru ebe niile, ị nwere ike ịmalite ndụ dị mma na otu nzọụkwụ. Ngwongwo Ngwongwo Ngwurugwu Na-adị Nso, nke mejupụtara nkà na ụzụ, nwere ike inye anyị obi ụtọ na ihu igwe oyi. Site na ụlọ nke radiation infrared, ọ nwere ike iji boby ọkụ dị ọkụ dị ka usoro okpomọkụ maka nlekọta ahụ ike. Mmiri na-egbukepụ egbukepụ nke dị na nke anyanwụ na-egbuke egbuke, nwere ike ịbanye n'ime anụ ahụ mmadụ ma hapụ ume, na-enyere aka na-enweta ihe ndị na-emepụta ọgwụ na ihe oriri na ahụ anyị. Ọ bụghị naanị na anyị nyere ngwaahịa ahụ a na-arụ ọrụ ọkụ ma na-enyekwa ọrụ nke oru OEM.
Na-ekpo ọkụ akwa maka azụ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Na-ekpo ọkụ Nkume Ụka Ọkpụkpụ Na-ekpo ọkụ ahụ maka aka Na-ekpo ọkụ akwa maka Countertop Na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Na UL na-ekpo ọkụ maka anụ ụlọ Ihe na-ekpo ọkụ maka anụ ụlọ